Displaying 54971 - 54980 of 87079
Local EU Statement on Ending Illegal Wildlife Trade
Wildlife trafficking has become one of the most profitable criminal activities worldwide, with devastating effects for biodiversity, and very damaging impact on sustainable development and poverty eradication, as well as the rule of law due to its close links with corruption. Ending wildlife trafficking isashared responsibility, and we must all take concrete action.
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်သွယ်နေခြင်းကို အဆုံးသတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့်ကိစ္စအပေါ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်ကူးခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လုပ်ဆောင်နေသော အမြတ်အစွန်းများစွာရသည့် ရာဇဝတ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာနေပါသည်။ ထိုသို့တရားမဝင်ကုန်ကူးခြင်းကြောင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအပေါ်တွင် လွန်စွာဆိုးရွားသည့်သက်ရောက်မှုများရှိနေပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်မှုနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုများအား တိုက်ဖျက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်လည်း အပျက်သဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုများရှိသည့်အပြင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပါ ဆက်နွှယ်လာနိုင်သည့်အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအပေါ်တွင်ပါ သက်ရောက်မှု များစွာရှိလာနိုင်သည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်ကူးမှု ပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
Photo Galleries - Entrainement du trinôme au combat urbain
Read more about Photo Galleries - Entrainement du trinôme au combat urbain
Read more about Conférence internationale de haut niveau sur le Sahel - Communiqué des coprésidents
EU News 40/2018